Archive du 20170222
Marc Ravalomanana � Tsy misy ni�ni izany eo �
Efa eto aho izao, hoy ny filohan�ny antoko Tiako i Madagasikara (TIM), Marc Ravalomanana, raha namaly ny fanontanian�ny mpanao gazety mikasika ny feo mandeha fa efa misy sahady ny sakantsakana isan-karazany mba tsy hilatsahany hofidiana ho filoham-pirenena amin�ny 2018.
Fampihavanana sy fitoniana Vonona tokoa ve ireo mpanao politika ?
Hifarana anio indray, etsy amin�ny carlton Anosy, ny atrikasa iray izay natomboka omaly natokana ho an'ny antoko politika ary miompana amin�ny tarika sy fampanjakana ny fandriampahalemana sy ny demokrasia eto amin�ny firenena.
Omer Beriziky � Tanteraho ny hetahetam-bahoaka �
Tsy ny fanovana anaran-drafitra no zava-dehibe sy hitondra fiovana fa ny votoatiny, raha nanontanian�ny mpanao gazety mikasika ilay 12 miliara ariary hofenoina ao anatin�ny kitapom-bolam-panjakana izay nantsoina hoe PACEM taloha ary novana SACEM ankehitriny ny praiminisitra teo aloha Jean Omer Beriziky.
Loholona sy mpandraharaha iray Mandroba any Fianarantsoa
Loholona sy mpandraharaha iray efa malaza ho tsy azo kitikitihina noho izy ireo milaza fa akaikin'ny filoham-pirenena indray no voalaza fa manao fananararaotam-pahefana any amin�ny faritra Fianarantsoa any amin�izao fotoana izao, ka mihorohoro tanteraka ny mponina.
Fiaiken-keloka sy fifonana Tsy sakana amin�ny fampiharan-dal�na
Ohabolana Malagasy tsy lefy laza mandrak�ankehitriny ny hoe �Ny heloka ibabohana mody rariny�.
Fifidianana 2018 Taraiky Rajoelina, malalaka i Dadavalo
Resaka voizina amin�izao ny hoe �ni�ni�� mba hisakanana ireo kandida atahorana na dia milaza aza ny fanjakana HVM fa tsy misy ny sakantsakana rehefa mahafeno fepetra.
Taratasin�i Jean Zatra ny lalan-dririnina
Miarahaba an�i Jean indray aloha nahatratra izao maraina vaovao ahafahana manambaka anay izao e ! Atao ahoana moa fa sendra izay mpiara-monina efa resy tanteraka ka dia eo ambany fahefanareo manontolo e !
Hery Rajaonarimampianina Fototry ny loza
Manomana fatratra ny firotsahan-kofidiany amin�ny fifidianana filoham-pirenena ho avy manaraka eo ny filoha am-perinasa Hery Rajaonarimampianina.
Raharaha Hiary Rapanoelina Nisintona ny fitoriany ny sendikan�ny artista
Mivaha amin�ny ampahany ny raharaha nahasaringotra ilay mpanakanto Hiary Rapanoelina, naiditra am-ponja vonjimaika noho ny raharaha fanalam-baraka tao anatin�ny vondrona fesiboky (Fifosana hanatsarana ny �pipoles� Gasy).
Boriborintany Faharoa Efa mivoatra
Miha mivoatra ny Boriborintany faharoa � Antananarivo Renivohitra ankehitriny. Efa mihatony ny fandriampahalemana, manomboka tsy hita ny mpivarotra amoron-dalana, madio sy milamina ny tan�na.
Mihavitsy ny omby 60 kamiao isan�andro no mivoaka ao Ihosy
Ahiana tsy hisy omby intsony eto amintsika afaka dimy taona, hoy Rabetsara Lita, filohan�ny fikambanana mpiaro ny zon�ny mpanjifa RNDC. Mety hiakatra 40.000 Ar ny iray kilao afaka dimy taona ka hifampitadiavana indray ny masikita�
BANKY BNI Namoaka tolotra vaovao indray
Namoaka tolotra vaovao indray ny banky BNI entina hanomezana fahafaham-po ny mpanjifa rehetra. Karazana �pack� miisa telo izy io, tolotra izay izy ireo no nisantatra izany voalohany teto amintsika no sady tsy mitsaha-mivoatra.
RAHARAHA HAFARI MALAGASY Hivoaka ny 28 febroary ny didim-pitsarana
Niakatra fitsarana omaly ny filoha nasionalin�ny fikambanana HAFARI Malagasy Rafanomezantsoa Jean Nirina taorian�ny dimy volana mahery nampidirana am-ponja azy vonjimaika teny amin�ny fonjaben�Antanimora.
Tsy ampy finiavana !
Fomba fisaina zary raiki-tapisaka amin�ny Malagasy, indrindra ny mpitondra, ny miantso manampahaizana avy any ivelany.